XALKA OGAADEENYA WAA XALKA GEESKA AFRIKA
Dadka qaar bay la tahay arrinta Ogaadeenya arrin fudud oo aan wax macno ah u lahayn. Qaarkoodna waxayba si fudud oo aan ka fiirsasho lahayn u yiraahdaan;- Ogaadeenya badba malahanee maxaa laysugu dhibayaa ama maannu iska dayno. Kuwaasi way malo habaabeen mana ay garanyaan macnaha iyo muhiimadda ay Ogaadeenya ku fadhido. Waxay muhiimadda u yaqaaniin oo qudha badaha iyo dekedaha. Waa run in aysan Ogaadeenya bad lahayn. Laakiin waa dhul sida kale hodan u ah, oo waliba muhiim ah.
Waxaa laga helay shidaal ceelka �Jeexdin� ee degmada Shilaabo. Sannadkii 1994kii waxay idaacadda British Broadcasting Corporation laanta af Soomaaliga sheegtay in shidaalka laha helay ceelka Jeexdin uu yahay Gaaska dabiiciga ah, isla markaasna uu ceelkaasu yahay 4 waddan ee ugu badan Gaaska dabiiciga ah. Taasina waxay marag u tahay in Ogaadeenya uu yahay dhul hodan ku ah shidaalka iyo saliidaha caydhiin. Waana mid ka mida sababaha ay Itoobiya isugu dhajinayso.
Waxaa kaloo kaba sii muhiimsan meesha ay Afrika kaga taallo Ogaadeenya. Ammaanka iyo degenaanshaha waa mid muhiim u ah gobolka oo dhan. Dagaal kastoo ka dhaca gobolka geeska Afrika wuxuu lug ku sheeshaa Ogaadeenya, dhinac kastaaba ha kaga yeeshee. Dagaal kasta oo Ogaadeenya quseeyana wuxuu wada gaadhaa gobolka oo dhan. Mana dhacdo inuu iyada ku ekaado sababo badan awgood. Mararka qaarna wuxuuba isu rogaa dagaal caalami ah oo gobolka intuu dhaafo ayuu adduunka gaadhaa, sida dagaalkii 1977-78kii. Iyo kan hadda ugu danbeeyay ee uu Mareykanku ku taageeray inay Tigreegu qabsadaan jamhuuriyaddaa Soomaaliya.
Waxaa kaloo jirta in khilaafka biyaha �Nile� iyo khilaafka koonfurta Suudaan uu faraha la soo galaa arrinta Ogaadeenya. Wuxuuna u yahay cabbir siyaasadeed iyo furaha nabadda. Sababtoo ah markasta oo ay dawladda Masar cabsi ka dareento biyaha Nile waxay qojaysaa ama ay ku gorgortantaa qaddiyadda Ogaadeenya. Taasuna maahan wax lala yaabo oo waa siyaasad iyo caynkeeda. Xittaa dagaalkii Itoobiya iyo Eretereeya wuxuu faraha si toos ah ula soo galay arrinta Ogaadeenya.
Haddii aynu hoos u sii daganno xalka Ogaadeenya waa xalka ummadda Soomalaiyeed oo dhan, gaar ahaan waa xalka jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Haddii Ogaadeenya xal loo helo jamhuuriyaddana xal waa loo helayaa. Taasna waxaa caddayn u ah dawlad kasta oo ay jamhuuriyadda Soomaliya la heshiiso ama la colloowdo waxay ku xidhantahay meesha ay ka taagantahay dawladdaas qaddiyada Ogaadeenya.
Waxa ay dawladda Carta ee ku meel gaarka aheyd u hortaagnaayeen Tigreeguna waxay aheyd qaddiyadda Ogaadeenya oo laga doonayay inay u saxiixaan. Tii horana ee uu Madaxweynaha ka ahaa Gen Maxamed Siyaad Alle ha u naxariistee waxaa loo burburiyay waxay ahayd isla qaddiyaddan. Xittaa xukuumaddii lixdankii dhalatay waxa iyadoon curanba dagaalka ku kallifay waxay ahayd qaddiyaddan.
Hadda waxay Tigreegu ku wada qabsadeen jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan waa isla qaddiyaddan. Haddii xal helo Ogaadeenya colaadda iyo khilaafaadka geeska Afrika way yaraanayaan. Haddii aan xal loo helinna geeska Afrika nabad iyo degenaansho ka dheer. Sababtoo ah inta dad la dulminayo oo dadkale ay ku dul-noolyihiin nabadi imaan mayso, cirka ayaana taas ka dhow.